फेसबूक पोस्टका कारण एक वर्ष जेल हालिएका पत्रकारको कथा - BBC News नेपाली
ती प्रहरीले ३९ वर्षीय किशोरचन्द्र वाङ्ग्खेमलाई भने नगरका प्रहरी प्रमुखले उनीसँग केही कुरा गर्न चाहन्छन्।
"केही पनि हुँदैन, कुनै चिन्ता नगर्नू," वाङ्ग्खेमकी श्रीमती रञ्जिता एलङ्ग्बमले त्यतिबेला प्रहरीले उनीहरूलाई भनेको स्मरण गर्दै भनिन्।
पत्रकारलाई ‘जनताका शत्रु’ नभन्न आग्रह
"म स्तब्ध भएँ"
उनले भनिन्, "म स्तब्ध भएँ। शुरूमा हामीलाई भेट्न नमानेका प्रहरी अधिकारीले मेरो श्रीमान्‌लाई थुनिएको र उनको लागि न्यानो कपडा र दोलाईँ ल्याइदिन भने। भोलिपल्ट पत्रिका पढेपछि मात्र हामीले उनलाई के कारणले थुनिएको हो भनेर थाहा पायौँ।"
वाङ्ग्खेमको अपराध यस्तो थियो: उनले नोभेम्बर १९ तारिखमा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नेतृत्वको स्थानीय सरकारको आलोचना गरिएका चारवटा भिडिओ आफ्नो फेसबुक पेजमा पोस्ट गरेका अर्थात् राखेका थिए। उनले मणिपुरका मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको संघीय सरकारको "कठपुतली"को संज्ञा दिएका थिए।
उनले एक पोस्टमा लेखेका थिए, "धोका नदेऊ। मणिपुरका 'स्वतन्त्रता सङ्ग्राम'का लडाकूहरूलाई नबिर्सनू।"
प्रहरी निरीक्षक के बबीले आफ्नो प्रतिवेदनमा चाहिँ वाङ्ग्खेमले "सरकारविरुद्ध घृणा, द्वेष फैलाउँने र वितृष्णा जगाउने प्रयत्न गरेको" उल्लेख गरेका छन्। उनको त्यो कार्य "संविधानविपरीत र माझी औँला देखाउँदै आक्रामक शब्दले भरिएको…" उल्लेख गरेका छन्।
छ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा राखिएपछि उनलाई जिल्ला म्याजिस्ट्रेटकहाँ लगियो। तर न्यायाधीशले उनले कुनै "देशद्रोही" पोस्ट नराखेको र "सार्वजनिक पदधारीको सार्वजनिक क्रियाकलापलाई सडकमा प्रयोग हुने भाषामा राखेको" ठहर गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिए।
त्यसो त मणिपुरमा विगत ४० वर्षदेखि जातीय द्वन्द्वहरू, अग्राधिकार वा स्वतन्त्रताका नाममा विभिन्न प्रकारका विद्रोहहरू हुँदै आएका छन्। तर वाङ्ग्खेमलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिने क्रममा न्यायाधीशले प्रस्ट रूपमा उनले "शान्ति खलबल्याउने काम नगरेको" लेखेकै छन्।
'बाबा कता हराउनुभयो?'
"यो सबै सरकारी पक्षबाट भइरहेको शक्तिको दुरुपयोग मात्र हो र यो बक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको आक्रमण हो, " वाङ्ग्खेमका वकिल चोङ्ग्थाम भिक्टरले भने। वाङ्ग्खेमकी श्रीमती एलङ्ग्बम भन्छिन् उनले थुनामा राखिएका आफ्ना श्रीमान्‌लाई दुई पटक भेटिसकेकी छन्।
"उनी निकै बहादुर र आत्मविश्वास र भरीपूर्ण बन्दैछन्। उनी मलाई सबैकुरा ठिक भइहाल्छ भन्दै सम्झाउन कोसिस गर्छन्। तर हामी चिन्तित छौँ। हामी एकदमै धेरै चिन्तित छौँ। मेरी जेठी छोरी सोधिरहन्छिन् 'बाबा कता हराउनुभयो?'"
चीनमा निर्मित खोपले प्रदान गर्ने 'सुरक्षा दर उच्च छैन'
इरानको 'एउटा परमाणु केन्द्र आतङ्ककारी कार्यको निसानामा'
यूकेको राजपरिवारमा को-को छन् र कसरी काम गर्छन्